၀ိုင်းဖြေရှင်းပေးကြပါဦး — MYSTERY ZILLION
အမ်ဇက် ဖရန် ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါ..:103:
အလုပ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အခက်အခဲလေးပါ..သူပြောတော့ဗိုင်းရပ်စ် Scan ဖတ်ပြီးပြီးလို့ပြောပါတယ်.. ဒါဗေမယ် ့
C: ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်က အတိုင်းပေါ်နေတယ်...
အဲဒါ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်တာလို ့ပြောကြတယ်..
ဘယ်လိုလုပ်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလည်းဆိုတာ ဂျစ်ဖရန့်တွေ ပြောပြပေးကြပါဦး:)
နောက်တစ်ခု က အွန်လိုင်းကနေ တစ်ခုခု ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတော ့မယ်ဆိုရင်
အဲဒါကြီးက တက်တက် လာတယ်..သူ ့စက်မှာအဲ့ဒီ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ကြီးတင် ထားတာ...ဘာကို မှဒေါင်းလုပ်လုပ်လို ့မရသလို ဒေါင်းလုပ် လင့်ကို နှိပ်လိုက် ရင် လည်း တားမြစ်ပါတယ်.. Close နှိပ်လိုက်ရင် လည်း မဒေါင်းပေးတော့ပြန်ဘူး :2: စက်ကတော်တော် လေးလည်းလေးပါတယ်.. ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရမလား..အဲ ဒါကို လည်းတစ်ခါမှမသုံးဖူးလို့..
မျောက်ဖရန့်ရဲ့စက် ကို ဘာမှမလုပ်ခင် အမ်ဇက်ကို အရင် မေးတာပါ တော် တော် ကြာ လုပ်လိုက်မှ ပို ဆိုးသွားနေမှာစိုးလို ့...:P ဖောမတ်ချလိုက်မလားလို ့အားလုံးကို...
ဒီပိုစ် ့လေးကို ဖတ်ရလို့မောသွားရင် ရေသောက် ကြနော် ဒီမှာရေ \_~/ :P:P:P
အောက်ကအတိုင်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဘာမှလည်းမပေါ်ဘူး.. မျောက်ရေ.. ကြည့်လုပ်ပါဦး.. အမရဲ့.. ပုံမပါတော့ အနော်က ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. အနော်ကတော့ ရှင်းတယ်.. အခုစက်တောင် အန်တီ၊အန်ကယ်တွေ တင်မထားဘူး.. ဖြစ်လာလို့ကတော့ MCFA အသင်း၀င်ဖြစ်တဲ့အတွက်. အသင်းစည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲ.. အဆင်ပြေတာမှလွန်ရော... :P
MCFA = Myanmar Computer Formatter Association လို့ပြောပြဘူး..
အသင်းစည်းကမ်းဆိုတာ ဖောမတ်ချလိုက်တာလို့လည်းပြောပြဘူး.. :P
အောက်ကအတိုင်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဘာမှလည်းမပေါ်ဘူး.. မျောက်ရေ.. ကြည့်လုပ်ပါဦး.. အမရဲ့.. ပုံမပါတော့ အနော်က ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. အနော်ကတော့ ရှင်းတယ်.. အခုစက်တောင် အန်တီ၊အန်ကယ်တွေ တင်မထားဘူး.. ဖြစ်လာလို့ကတော့ mcfa အသင်း၀င်ဖြစ်တဲ့အတွက်. အသင်းစည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲ.. အဆင်ပြေတာမှလွန်ရော...
ဒီမှာတော့အားလုံးမြင်နေရတယ် အကို ရ.. ဒီဘက်မှာအဆင်ပြေတယ် ... ကွန်နက် ရှင်ကြောင် ့ထင်တယ်.. ဒါမှမဟုတ် ညီမတင်တာ မရတာ လား
အမှန်အကန်မမြင်ရတာမျောက်ရေ.. ဒီမှာ ကွန်က 20kb/s လောက် ဒေါင်းလုပ်ဒ်စပိ ရနေတာကို ပေါ်ရမှာပေါ့.. လုံး၀ကိုမပေါ်တာ.. ပုံကိုထိုးတဲ့ လင့်ခ်တစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါဦး..မျောက်ရေ...
Now, Ok Brother.... You can see that image and help me.....:103:
ဗိုင်းရပ်စ်သေသွားရင်တောင်မှအဲ့ဒီလိုမျိုး Double Clickနှိပ်ပြီး၀င်လိုက်
ပြီးရင် c:,D:တို့ရဲ့ Drive letter ကိုနာမည်ပြောင်းပေးဖို့ပါပဲ........
ဥပမာ...Local Disk c: ကို system လို့ပြောင်းပေးတာမျိုးပေါ့
အခြား အဲ့ဒီလို Drive တွေကိုလည်းနာမည်ပြောင်းပြီးပြန်၀င်ကြည့်လိုက်ပါ
နောက်အောက်က antivirus ကိုတော့မသုံးဖူးပါ...အဆင်မပြေရင်တော့ဖြုတ်ချလိုက်ပါ
ပြီးရင် window+E စုံနှိပ်လိုက်ရင် My Computer Box ပေါ်လာပါမယ်။ ဘယ်ဘက်ဘေးကနေ C: ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ autorun.inf ဆိုတာတွေ့ပါမယ် အဲဒါကိုဖျက်ပါ။ ကိုလဲ ထိုနည်း၎င်းလုပ်ပါ။ cmd ကနေ command ပေးပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ command ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်လို့ပါ။ အစ်မမျောက်တင်ထားတဲ့ အောက်ကနောက်တစ်ပုံက avast တင်ထားလို့ပါ။ အဲလိုမပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ် အလွယ်ဆုံးကတော့ uninstall လုပ်ပြီး kaspersky လေးသုံးတာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အရမ်းကြီးလေးတာမကြိုက်ရင်တော့ NOD 32 လေးစမ်းသုံးကြည့်ပါ။ kaspersky လောက်မကောင်းပေမယ့် တခြားဟာတွေထပ်တော့သာပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
အကိုရေ..ဒါလေးသုံးကြည့်ပါလားဗျာ..ကျွန်တော်တို့တော် Autorun ပြသာနာတက်ရင် ဒါလေးနဲ့ဘဲဖြေရှင်းပါတယ်ဗျာ...CPE17 ကပို့ပေါ့ပါးပါတယ်ဗျာ...
:P ဖောမတ်ချလိုက်မလားလို ့အားလုံးကို...
Format ချဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆို လုပ်သာလုပ် အားပေးတယ်နော် ဟိဟိ :71::71::71:
အဲ့တာမှန်တယ် ဗျို့nod32 က kaspersky လောက်မကောင်းပေမဲ ့တခြားဟာတွေထပ်တော့သာ
ပါတယ်ဆိုတာ လိုချင်ရင်တော့ လင့်ပေးမယ် version4 ထွက်ပြီ
" ဗကပ " ကကောင်းတယ်ဆို --- ( BKAV Antivirus - ဗီယက်နမ် Made )
Kaspersky ကကောင်းဘူး။ ဗကပ ပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီး .. ပြောမရဆိုမရ ငြင်းထားတာ ... ....
အဲဒါတင်ပေးလိုက်လေ ... :P
နင်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာမျိုး ပေါ်ပေါ်ရဲ့ Folder ပြဿနာ Thread မှာလဲရေးထားတာရှိတယ်။ မနန်းဖြစ်ဖူးတာ ... EiEiygn လဲရေးထားတယ်။ ငါလဲ သိသလောက်လေးရေးထားတယ်။ သေချာတော့မဖတ်ထားပဲနဲ့။ Link တော့ပြန်မပေးတော့ဘူး။ ထပ်တွေ့ရင်ထပ်ဖွနေကြဦးမှာစိုးလို့။
ဒါပေမဲ့ ... ဒီမှာရေးထားတာတွေကပဲတော်တော်စုံနေပါပြီ။
ဗကပ ကအခုမရှိတော့ဘူး:p....တောထွက်သွားပြီ..:p.:dတင်ချင်ရင်တောင် မရတော ့ဘူး....
ဒါဗေမယ့်အဲတုန်းကတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အန်တီဗိုင်းရပ်ပါဟာ...:2:
အားပေးတယ်ဆို လက်မနှေးတော့ဘူးနော် ကိုပရစ်:78:
Drive တွေကို double click နှိပ်ရင် Open with Box ကျကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ fixdrive ဆိုတဲ့ software လေးကို ဒေါင်းပြီးလုပ်လိုက်ပါ ၁စက္ကန့်တောင်မကြာပါဘူး double click ပြန်ရပါလိမ့်မယ် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ size ကလဲ kilobyte လေးပဲရှိတာ အ၇မ်းကောင်းတဲ့ software လေးမို့ မျှေ၀ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ
Trojan ၀င်တယ်လို့ပြောတာကတော့ Avast ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်
Avast ကိုဖြုတ်ပြီး kaspersky တင်ပြီး Full Scan အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
learnboy wrote: »
ဖရန် ့ရေ..လင် ့ကလေးပါမျှပေးရင်ပိုကောင်းမယ်:dနော် အားလုံးလည်းအလွယ်တကူယူသုံးလို ့ရအောင်
ပြောတော့မျှေ၀လိုက်ပါတယ်တဲ့.. လင့် လည်း ပါမလာဘူး.. ဘာနဲ့ ပြန်ပြီး မျှေ၀ခံစားရမလဲဟင်...:p
အဆင်ပြေရင် ကျေးဇူးပြုပြီး မျှေ၀တဲ့ လင့် လေး ပြန်တင်ပေးပါနော်.. ...:5::5:
အစ်မမျောက်ရေ ကျွန်တော်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားဗျ။ အမှန်ဆို ဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ နည်းနဲ့အဆင်ကိုပြေပါတယ်။
fixdrive လေးနဲ့မှစမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့၂ခုတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ကို ညမီးအိမ် အကိုပေးထားတာ မစမ်းကြည့်ရသေးလို ့ပါ.. ပြဿနာရှင် သူငယ်ချင်းက ဒီနေ့ပိတ်ရက်မို ့လို့.... လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ့မယ်..... ကျေးဇူးပါပဲ